Maxaa looga kala cararayaa gobolka Kashmiir? - BBC News Somali
Image caption Dadka ayaa looga digay weerarro argagixiso
Kumannaan qof oo ay ku jiraan dalxiiseyaal iyo xujey Hinduu ah ayaa ka baxsanaya deegaannada ay Hindiya ka maamusho gobolka Kashmiir, ka dib markii ay mas'uuliyiinta maxalliga ah ka digeen weerar argagixiso.
Saraakiisha dowladda Hindiya ayaa qeylo-dhaan kasoo saaray khatar dhinaca argagisada uga imaan karta dadka xujeyda Hinduuga ah ee ku wajahan macbadka Amarnath.
Kooxo mintidiin ah oo taageero ka helaya Pakistan ayaa qorsheynaya weeraro lala beegsado xujeyda, sida ay saraakiishu sheegeen.
Dowladda Hindiya ayaa si joogto ah Pakistan ugu eedeysa inay soo hubeyso kooxaha fallaagada ah ee saldhigyada ku leh gobolka Kashmiir, arrintaas oo ah mid ay Pakistan mar walba beeniso.
Xajka sanadlaha ah ee ay sameeyaan dadka heysta diinta Hinduuga ayaa billowday 1-dii bishii Luulyo waxaana loogu talagalay inuu socdo 45 cisho.
Pakistan iyo Hindiya : Modi ma waxa uu isu muujinayaa nin xoog badan?
Qiyaastii 300,000 oo xujey ah ayaa booqatay macbadka ku yaalla dhulka korreeya ee buuraha Himilaaya, sida ay tabisay wakaaladda wararka ee AP.
Maamulka Kashmiir ayaa dadka kula taliyay inay "si deg deg ah" uga baxaan aaggaas, taasi ayaana sababtay cabsi iyo argagax weyn oo soo food saaray dadka.
Sarkaal ka tirsan dowladda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ku dhawaad 20,000 oo isugu jira xujey Hinduu ah iyo dalxiiseyaal iyo sidoo kale 200,000 oo dadka deegaanka ah ay billaabeen inay ka barakacaan goobaha amnigooda laga digay.
"Iyadoo laga shaqeynayo amniga dalxiiseyaasha iyo xujeyda macbadka Amarnath Yatris, waxaa lagu taliyay inay si dhakhso ah uga baxaan dooxooyinka Kashmiir", waxaa sidaas lagu yiri bayaan uu soo saaray wasiirka guriyeynta ee xukuumadda Kashmiir, Shaleen Kabra.
Hindiya ayaa dhawaan qaadday tallaabooyin lagu sugayo amniga, waxaana halkaas la geeyay ciidamo dheeraad ah oo gaaraya 10,000 oo askari, si loo adkeeyo amaanka howlaha xajka Hinduuga.
Kooxaha mintidiinta ah ayaa horay u beegsaday xujeyda halkaas tagta, markii ugu dambeysayna waxay ahayd sanadkii 2017-kii oo weerar dhacay lagu dilay 7 ruux.
Maalintii Sabtida, waddamada Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa muwaadiniintooda uga digay inay u safraan gobolka Kashmiir.
Image caption Hindiya iyo Pakistan ayaa wada maamula Kashmiir
Hindiya iyo Pakistan ayaa wada sheegta gobolkan ay muslimiintu ku badan yihiin, balse labada dowladood ayaa kala qeybsaday maamulka gobolka.
Labada dal ayaa 4 jeer isdagaalay wixii ka dambeeyay markii uu gumeystihii Ingiriiska ka tagay halkaas sanadkii 1947-kii, inta badan colaadahana waxay salka ku hayeen lahaanshaha gobolkaas.
Xisadda ayaa soo cusboonaatay bishii Febraayo ee sanadkan, ka dib markii ay mintidiinta fadhigoodu yahay Pakistan weerar ku dileen 40 askari oo Hindi ah, arrintaas ayaana dib usoo nooleysay dhaqdhaqaaqyada milatari ee labada dal.